मन्त्रालय धाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष ! अझै गाउँमा पुगेन सिंहदरबार, कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह अस्तब्यस्त | Hulaki Online
मन्त्रालय धाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष ! अझै गाउँमा पुगेन सिंहदरबार, कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह अस्तब्यस्त
स्थानीय चुनावका बेला नेताहरुले खुब जोडतोडका साथ भन्ने गरेका थिए कि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्दैछ । तर, स्थानीय चुनाव सकिएको ६ महिनासम्म गाउँपालिका अध्यक्षहरु कर्मचारीको खोजीमा सिंहदरबार धाउन विवश छन् ।
नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङ गत जेठ अन्तिम साता स्थानीय तह अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी भए । त्यसबेला तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले एक साताभित्र आवश्यक कर्मचारी पठाउने वचन दिएका थिए । बुधवार मन्त्रालयमा भेटिएका अध्यक्ष तामाङले गुनासो गरे, ‘अहिलेसम्म पनि हामीले कर्मचारी पाउन सकेका छैनौं ।’
कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिकाको कामकारवाही प्रभावित भएको तामाङले गुनासो गरे । उनका अनुसार हाल उक्त गाउँपालिकामा लेखा हेर्ने एक कर्मचारी र एकजना प्रशासकीय अधिकृत मात्रै छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले केही समयअघि प्राविधिकतिरका इन्जिनियर र ओभरसियर पठाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म त्यो पनि प्राप्त हुन नसकेको तामाङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार अहिले दैनिक कार्यसम्पादनका लागि तत्कालै कम्तिमा पनि १५ देखि २० कर्मचारी आवश्यक छ । तर, उनीसँग कर्मचारी छन् -जम्मा २ जना मात्र । कर्मचारी अभावले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्न नसक्दा जनताबाट ‘प्रेसर’ आउन थालेको उनी बताउँछन् । यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । अहिले मुलुभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको छ । पूस-६, २०७४